Baaxadda Nadiifinta Gaadiidka Dadweynaha waxay ku Fidineysaa Gaziantep | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia27 GaziantepBaaxadda Ballaarinta Nadiifinta ee Gaadiidka Dadweynaha ee Gaziantep
17 / 03 / 2020 27 Gaziantep, Gobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Baaxadda nadaafadda ayaa ku fidaysa gaziantep
Dowlada Hoose ee Gaziantep waxay balaarineysaa baaxadda nadaafadda ee gaadiidka dadweynaha ee caafimaadka dadweynaha. Wuxuu raaciyay basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay ee buluugga ah iyo kuwa jaalaha ah, tagaasida, tagaasida, adeegyada shaqaalaha iyo adeegyada ardayda howlaha nadaafada ee caadiga ah ee ka dhex shaqeeya taraamyada iyo basaska Magaalada.
In kasta oo Cudurka 'Corona Virus' (Covid-19), oo saameeya adduunka adduunka, uu kordhiyo tirada dadka uu ku gudbayo maalin kasta, tallaabooyinka ayaa lagu kordhiyaa dalka iyo dibeddaba. Tallaabooyinka taxaddarka, labadaba dal iyo magaalo ahaan, waxaa loo adkeeyay cudurka loo yaqaan 'Corona Virus', oo loo yaqaan 'Faafida' Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), kaasoo ah cudur faafa oo adduunka oo dhan ku soo bandhigay saameynta uu adduunka ka leeyahay. Sidaas awgeed, Dawladda Hoose ee Magaaladu waxay sidoo kale ku bixisaa shaqo ballaadhan sidii loo xoojin lahaa tallaabooyinka ka hortagga cudurka faafa. Marka la eego baaxadda daraasadaha lagu buufiyo iyo jeermis-ka-dilidda, alaabada ay ruqsad ka haysato Wasaaradda Caafimaadka oo ay oggolaatay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa la isticmaalayaa.
Sii wadida kala-goynta joogtada ah ee dhismayaasha iyo gaadiidka dadweynaha ee kuxiran, Büyükşehir wuxuu ballaariyay baaxadda shaqadeeda. Kooxaha Dawladda Hoose ee Magaalada waxay bilaabeen inay nadiifiyaan oo ay jaan-gooyaan basaska dadweynaha ee 665 buluug iyo jaalaha ah ee bixiya gaadiidka dadweynaha, iyo sidoo kale adeegyadii ardayda oo laga bilaabay baaxadda tallaabooyinka nadaafadda ee lagula dagaallamayo viruska. Gacanta albaab, gacan qabyada, iyo kuraasta, oo badanaa la xiriira rakaabka, si joogto ah waa loo jeermisyaa. Dhanka kale, kooxaha booliiska Dawladda Hoose ee Magaaladda ayaa hubin doona in wadayaasha gaadiidka dadweynaha ay raacaan qawaaniinta nadaafadda ayna qiimeyn doonaan cabashooyinka ka imanaya rakaabka.
Kuxigeenka Duqa Magaalada Gaziantep Dowlada Hoose ee Magaalada oo bayaan ka soo saaray mowduuca. Mehmet Berk wuxuu hoosta ka xariiqay in nadiifinta iyo nadiifinta dhammaan baabuurta gaadiidku ay sameyn doonaan Dawladda Hoose ee Magaaladda, “Waxaan ku muujineynaa dareen weyn xasilooni gelinta gudaha iyo gacanta albaabbada banaanka ee gawaaridayada. Marka xigta, waxaan ku dadaaleynaa inaanu muwaadinku u helno jawi nadaafadeed anagoo adeegsanayna dhowr shaqo oo gaariga dhexdiisa ah. Hawlahaas, dhammaan faahfaahinta waxaa loo tixgeliyey inay si faahfaahsan u faahfaahsan yihiin. Si kastaba ha noqotee, run ma ahan in howlaha jeermi-darka ee aan halkan ku soo bandhigno ay ku filnaan doonaan oo keliya, maaddadan nadiifinta ah waxay dadkayaga u soo bandhigi kartaa jawi caafimaad qaba ilaa xad illaa xad shaqooyinkeenna. Sababtaas awgeed, muwaadiniintu waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan nadaafadooda iyo nadaafadooda oo ay qaadaan taxaddarradooda. Waa inay ka koobnaataa waxyaabaha lagama maarmaanka u ah cologne iyo buufinta jeermiska. Gaadhiga waa inaanu jirin gacmo taabasho haddii uu hindhisto inta uu safrayo. Xaqiiqdii waa inuu haystaa gogosha ama guntin. Waan sii wadaynaa ku-buufiskaas maalin kasta oo kale. Qeybta Boliiska ee Magaalada Gaziantep waxay kormeerkeeda ku sameyn doontaa qaab kontaroola. Mulkiileyaashayada gawaarida ganacsiga ayaa fulin doona nadiifintooda gudaha iyo dibedda iyadoo la raacayo qawaaniinta ay dejisay Wasaaradda Caafimaadka, Dowlada Hoose ee Magaaladu waxay qaadi doontaa nidaamka nadiifinta jeermiska. Xaqiiqdi waxaan fiiro gaar ah siin doonaa nadiifinta gacanta. Xiriirka labada dhinac, waxaan marwalba joogteyn doonnaa masaafo hal mitir ah. Sababta oo ah infekshanku wuxuu ku faafaa dhibcaha. Haddii aan ilaalinno fogaankan, waxaan meesha ka saari doonnaa suurtagalnimada in cudurka fidno.
Unal Akdoğan, Madaxweynaha Gawaarida Gaziantep iyo Rugta Ganacsiga Gawaarida, ayaa sheegay in joogsiyada oo dhan ay galeen abaabul guud oo nadaafadeed wuxuuna yiri: “koox ahaan, waxaan isku dayeynaa inaan sameyno wax kasta oo nagu dhaca. Waxaan sidoo kale isku daynay inaan si joogto ah u nadiifinno ka hor. Si kastaba ha noqotee, annaga oo kaashaneyna Dawladda Hoose ee Gaziantep, waxaan si weyn u kordhin doonnaa nadiifinta nadaafadda gawaaridayada. Waxaan jeclaan lahayn inaan uga mahadcelino Duqa Magaalada Fatma Şahin iyo kooxdeeda taageerada ay ku siinayaan jihadaan. ”
Kordhinta Gaadiidka Gaadiidka ee Gaziantep